I-Acquia: Iyini Ipulatifomu Yedatha Yamakhasimende? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, January 10, 2020 NgoLwesibili, Novemba 10, 2020 Douglas Karr
Njengoba amakhasimende exhumana futhi enza ukuthengiselana nebhizinisi lakho namuhla, kuya kuba nzima ngokwengeziwe ukugcina umbono ophakathi wekhasimende ngesikhathi sangempela. Ngibe nomhlangano namhlanje ekuseni nekhasimende lethu ebelinezinkinga nje. Umthengisi wabo we-imeyili wokuthengisa wehlukile kupulatifomu yabo yemiyalezo ephathekayo ngaphandle kwendawo yabo yokugcina idatha. Amakhasimende abesebenzisana kepha ngenxa yokuthi idatha emaphakathi ibingavumelanisiwe, imilayezo kwesinye isikhathi ivuselelwa noma ithunyelwe ngemininingwane emibi. Lokhu bekukhiqiza isidingo esikhudlwana sabasebenzi benkonzo yabo yamakhasimende futhi kucasula amaklayenti abo. Siyabasiza ekwakheni kabusha uhlelo besebenzisa imilayezo ehlukile API lokho kuzogcina ubuqotho bedatha.
Lezi yiziteshi ezimbalwa nje ezidala inkinga. Cabanga uchungechunge lwezindawo eziningi ngokuthembeka kwamakhasimende, ukuthengiselana okuthengiswayo, ukuxhumana nomphakathi, izicelo zesevisi yamakhasimende, idatha yokukhokha, kanye nokuxhumana kweselula. Ngeza kulokho ukubuyisana kwezimpendulo zokumaketha ngemithombo yedatha ye-omni-channel… yikes. Yingakho Amapulatifomu Wedatha Yamakhasimende ziguqukile futhi zithola ukubambeka esikhaleni sebhizinisi. Ama-CPD anika amandla inkampani ukuthi ihlanganise futhi ibalaze idatha kusuka emithonjeni engamakhulu, ihlaziye idatha, idale ukubikezela okususelwa kudatha, futhi ibandakanye kangcono futhi ngokunembile namakhasimende abo kunoma yisiphi isiteshi. Ngokuyisisekelo, ukubukwa kwamakhasimende okungu-360-degree.
Ipulatifomu yedatha yamakhasimende (i-CDP) iyi-database yamakhasimende edidiyelwe ephethwe ngabakhangisi ehlanganisa idatha yamakhasimende enkampani ekumaketheni, ekuthengiseni naseziteshini zensiza ukunika amandla ukumodeliswa kwamakhasimende nokushayela isipiliyoni samakhasimende. UGartner, Umjikelezo weHype Wokumaketha Kwedijithali nokukhangisa
Ngokusho the CDP Isikhungo, Ipulatifomu Yedatha Yamakhasimende inezinto ezintathu ezibucayi:
I-CDP uhlelo oluphethwe ngabakhangisi - i-CDP yakhiwe futhi ilawulwa ngumnyango wezokumaketha, hhayi umnyango wezinkampani we-Information Technology. Izinsizakusebenza ezithile zobuchwepheshe zizodingeka ukusetha nokugcina i-CDP, kepha ayidingi izinga lekhono lobuchwepheshe bephrojekthi ejwayelekile yokugcina idatha. Okubaluleke kakhulu ukuthi ukumaketha kuphethe ukunquma ukuthi yini engena ohlelweni nokuthi ivezani ezinye izinhlelo. Ikakhulu, kusho ukuthi ukumaketha kungenza ushintsho ngaphandle kokucela imvume yanoma ngubani, noma kungadinga usizo lwangaphandle.
I-CDP idala imininingwane egciniwe yamakhasimende eqhubekayo - I-CDP idala umbono ophelele wekhasimende ngalinye ngokufaka idatha kusuka kumasistimu amaningi, ukuxhumanisa imininingwane ehlobene nekhasimende elifanayo, nokugcina imininingwane ukulandelela ukusebenza ngokuhamba kwesikhathi. I-CDP iqukethe izihlonzi zomuntu siqu ezisetshenziselwa ukukhomba imiyalezo yokuthengisa nokulandela imiphumela yezinga lokukhangisa ngalinye.
I-CDP yenza leyo datha ifinyeleleke kwezinye izinhlelo - Idatha egcinwe ku-CDP ingasetshenziswa ezinye izinhlelo zokuhlaziya nokuphatha ukuxhumana kwamakhasimende.
Idatha yeKhasimende le-Acquia ne-Engagement Hub
Njengoba abathengisi bathinteka kakhulu kulo lonke ulwazi lwamakhasimende, ukufaka idatha yamakhasimende abo kuziteshi zonke, kuwo wonke amaphuzu okuthintwayo, nakuyo yonke isikhathi somjikelezo wempilo yamakhasimende abo kubalulekile. Ukuthola ungumholi kule mboni futhi Idatha yamakhasimende nehabhu lokuzibandakanya unikeza:
Ukuhlanganiswa Kwedatha - hlanganisa yonke idatha yakho, kunoma iyiphi ifomethi, kusuka kunoma imuphi umthombo wedatha kuziteshi zedijithali nezingokomzimba ezinezixhumi nama-API angaphezu kwama-100 akhiwe ngaphambilini.
Ikhwalithi yedatha - misa ngokulinganayo, dedupe, futhi unikeze izimfanelo ezifana nobulili, i-geography, nokushintsha kwekheli kuwo wonke amakhasimende. Ngokufaniswa okufanayo nokungaqondakali, i-AgilOne ixhumanisa yonke imisebenzi yamakhasimende kuphrofayela yekhasimende eyodwa noma ngabe kunegama elilodwa kuphela, ikheli, noma ukufana kwe-imeyili. Idatha yekhasimende ivuselelwa ngokuqhubekayo ngakho ihlala ifaka idatha entsha sha.
Ukuqagela Ukuhlaziya - ama-algorithms wokuzifundela wokufundisa azisa i-AgilOne's analytics futhi sikusize uzibandakanye kangcono namakhasimende. I-AgilOne inikela ngamamethrikhi angaphezu kuka-400 aphuma ebhokisini enza ukuba abathengisi bakwazi ukudala kalula futhi bachaze noma yiziphi izindlela abafuna ukuzibika nezenzo ngaphakathi kohlelo - ngaphandle kokufaka amakhodi ngokwezifiso.
Amaphrofayli weKhasimende angama-360-Degree - yakha iphrofayili ephelele ye-omni-channel yamakhasimende akho, ngokuhlanganisa idatha enjengohambo lwamakhasimende ngawodwana, ukuzibandakanya kwewebhusayithi kanye ne-imeyili, umlando wokuthengiselana wesiteshi esidlule, idatha yabantu, okuthandwa ngumkhiqizo nezincomo, amathuba okuthenga, nokubikezela analytics, kufaka phakathi amathuba okuthenga namaqoqo leli khasimende elingelakho. Lawa ma-profiles azisa ngamasu wokutshala imali, ukuthi ungazenza kanjani ngezifiso, nokuthi ungajabulisa kanjani amakhasimende akho.
Ukwenza kusebenze i-Omni-Channel Data - Ngaphakathi kwesikhombimsebenzisi esisodwa, abathengisi bangaklama futhi baqalise ezenhlalo, amaselula, i-imeyili eqondile, isikhungo sezingcingo, nemikhankaso yesitolo ngqo, ngenkathi kwenziwa izethameli, izincomo, nokunye ukukhishwa kwedatha, okutholakala kunoma yiliphi ithuluzi ngaphakathi kohlelo lwakho lokumaketha.
Ukwenza ngokwezifiso okuhleliwe - Ukudidiyela imiyalezo eyenziwe yaba ngeyakho, okuqukethwe, nemikhankaso kuzo zonke iziteshi zedijithali nezingokomzimba, enikeza abathengisi ukungaguquguquki kwezwi noma ngabe ikhasimende lihlanganyela nini noma kuphi. I-AgilOne ibuye inikeze abathengisi isiqiniseko sokuthi baletha umyalezo ofanele kumuntu ngamunye, ngoba i-AgilOne iqinisekisa ukuthi konke ukwenza ngezifiso kusekelwe kulwazi olulodwa oluhlanzekile, oluqinisekisiwe lwamakhasimende.
Tags: I-360-degreei-agilonecpdidatha yekhasimendeIpulatifomu Yedatha Yamakhasimendeiphrofayili yekhasimendeihabhu lokubandakanyaisiteshi se-omni
Uhlu lwakho lokuhlola lwe-Blogger